परमेश्वरसँगको अनुभवहरू, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गड स्विट्जरल्याण्ड (WKG)
«तपाई जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै आउनुहोस्! यो एक रिमाइन्डर हो कि परमेश्वरले सबै कुरा देख्नुहुन्छ: हाम्रो उत्तम र सबैभन्दा खराब, र अझै उसले हामीलाई प्रेम गर्दछ। तपाईंको जस्तो मात्र बोलावट रोममा प्रेरित पावलले लेखेका यी शब्दहरूको प्रतिबिम्ब हो: Christ जब हामी ख्रीष्ट कमजोर थियौं, हाम्रो निम्ति नास्तिकहरूको लागि मर्नुभयो। अब धर्मीको खातिर कोही पनि मर्दछन्; सायद राम्रोको लागि उसले आफ्नो जीवनलाई हिम्मत गर्दछ। तर जब हामी पापी थियौं, हाम्रो निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो भन्ने तथ्यलाई परमेश्वर हामीलाई देखाउनुहुन्छ। (रोमी .5,6.२8-२XNUMX)
आज धेरै मानिसहरू पापको बारेमा सोच्दैनन्। हाम्रो आधुनिक र उत्तर आधुनिक पीढीले "शून्यता", "हताशता" वा "मूर्खता" को भावनाको हिसाबले अधिक सोच्दछ, र तिनीहरूले हीन भावनाको भावनामा उनीहरूको आन्तरिक संघर्षको कारण देख्दछन्। तिनीहरूले आफूलाई मायालु बन्ने साधनको रूपमा आफैलाई प्रेम गर्न कोशिस गर्न सक्छन्, तर अधिक सम्भावना छैन, उनीहरूलाई लाग्छ कि तिनीहरू पूर्णतया समाप्त भइसकेका छन्, भाँचिएका छन्, र तिनीहरू फेरि कहिल्यै सुरक्षित हुनेछैनन्।
तर हाम्रो कमी र असफलताहरूको बीचमा भगवानले हामीलाई परिभाषित गर्नुहुन्न; उसले हाम्रो सम्पूर्ण जीवन देख्छ: राम्रो, नराम्रो, कुरूप र उसले जे भए पनि हामीलाई माया गर्छ। भगवान्‌ले हामीलाई माया गर्नु गाह्रो छैन भने पनि हामीलाई यो प्रेम स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ। हामीलाई गहिरो रूपमा थाहा छ कि हामी यो प्रेमको योग्य छैनौं। १ 15 औं शताब्दीमा, मार्टिन लुथरले नैतिक तवरमा सिद्ध जीवन बिताउन गाह्रो संघर्ष गर्नुप .्यो, तर उनलाई यो लाग्थ्यो कि यो असफल भयो र निराश भएर उसले अन्ततः परमेश्वरको अनुग्रहमा स्वतन्त्रता भेट्टायो। त्यतिन्जेल, लुथरले आफ्ना पापहरू पहिचान गरिसकेका थिए - र निराश मात्र भएको थियो - येशूसँग परिचित हुनुको सट्टा, परमेश्वरको त्रुटिरहित र प्यारो छोरा, जसले लुथरका पापलगायत संसारका पापहरू हटाइदिए।
आजकल, धेरै मानिसहरू पापको बारेमा सोच्दैनन् भने पनि उनीहरूलाई हताशताको भावना हुन्छ र शंकाले भरिन्छ जुन गहिरो भावनालाई जगाउँछ कि एक मानिस प्यारा छैन। तपाईंले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने कि तिनीहरूको खालीपनको बाबजुद, तिनीहरूको बेकम्मा भए पनि, भगवान्‌ले उनीहरूलाई मूल्यवान्‌ ठान्नुहुन्छ र माया गर्नुहुन्छ। भगवान तपाईंलाई पनि माया गर्नुहुन्छ। परमेश्वर पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ भने पनि उहाँ तपाईंलाई घृणा गर्नुहुन्न। भगवानले सबै मानिसहरूलाई, पापीहरूलाई समेत प्रेम गर्नुहुन्छ, र पापलाई एकदमै घृणा गर्नुहुन्छ किनभने यसले मानिसहरूलाई चोट पुर्‍याउँछ र नष्ट गर्दछ।
"तपाई जस्तो हुनुहुन्छ" आउनुहोस् भन्ने हो कि परमेश्वर तपाईको अघि आउनु भन्दा पहिले तपाईको स्वास्थ्य राम्रो हुन पर्खिरहेको छैन। उसले पहिले नै तपाईंलाई माया गर्‍यो, तपाईंले जे गर्नुभयो पनि। सबै कुराबाट बाहिरको बाटो सुनिश्चित गर्नुभयो त्यसले तपाईंलाई उहाँबाट अलग पार्न सक्छ। उहाँले मानव दिमाग र हृदयको हरेक जेलबाट तपाईंको भाग्ने सुनिश्चित गर्नुभयो।
त्यो के हो जसले तपाईंलाई परमेश्वरको प्रेमको अनुभव गर्नबाट रोक्दछ? जेसुकै भए पनि: किन तपाईं यो बोझ येशूलाई सुम्पनुहुन्न, जो तपाईंको लागि बोक्न सक्नेभन्दा बढी सक्षम छ?